भारतमा आईपिएल नेपालमा सट्टेबाजी ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २० चैत्र २०७५, बुधबार १२:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । भारतमा इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) सुरु भएसँगै नेपालमा सट्टेबाजीको धन्दा चलाउने गिरोह पुनः सक्रिय भएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा अहिले अनलाईनमार्फत सट्टेबाजीको धन्दा चलाउने गिरोह राजधानीमा छ्याप छ्याप्ती देखिन थालेका छन् ।
नागराज नामले कुख्यात नथमल अग्रवालले नेपालमा यो धन्दाको सुरुवात गरेको स्रोत बताउँछ । केही महिना अगाडि नागराज पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५० लाख र सम्पत्ती सुद्धिकरणले मागेको ५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका नागराज अहिले गुमनाम छन् । स्रोतका अनुसार नागराजको धरौंटी रकम चर्चीत व्यापारी दिपक मल्होत्राले तिरेका थिए ।
सट्टेबाजीको धन्दा चलाउँदै आएका नागराजको धरौंटी रकम जम्मा गरेपछि नागराज र मल्होत्राको सम्बन्धलाई लिएर यतिखेर प्रश्न उठेको छ । कुनै बेला सुन तस्करीमा पनि मुछिएका मल्होत्राले नागराज जस्ता व्यक्तिलाई अगाडी सारेर सट्टेबाजीको धन्दा चलाएको अहिले खुलासा भएको हो ।
पाँच महिना अगाडि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको फन्दामा परेका नागराजको धरौंटी बराबरको १ करोड रुपैंया मल्होत्राले तिरेपछि यो कुराको पुष्टि हुन आएको हो ।
मल्होत्राको सेटिङमै अहिले पनि सट्टेबाजीको धन्दा हुँदै आएको स्रोत बताउँछ । नागराजको बिचाराधिन मुद्दामा समेत मल्होत्राले सेटिङ मिलाएर मुद्दा जिताउन लागि परेका छन् । कर छलीको आफ्नै मुद्दा सर्बोच्चमा भएको कारण भैतारिदै हिडेका मल्होत्रा अहिले नागराजलाई पनि जोगाउन लागिपरेका छन् ।
नागराजका सहयोगीका रुपमा रहेका गौरव तिवारीको समूहलाई लिएर अहिले पनि धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।
अहिले पुन यो समूह एक भएर सट्टेबाजीको धन्दा चलाउँदै आएका छन् । तिवारीको समूहलाई तत्कालिन समयमा काठमाडौं परिसरले पक्राउ गरेको थियो । सो समयमा काठमाडौं परिसरमा एसएसपी विश्वराज पोखरेल थिए ।
पक्राउ पर्नासाथ मिडियामा ठूलो हल्ला गर्ने एसएसपी पोखरेलले अन्तिममा जुवा अन्तर्गत मुद्दा चलाए र उनलाई उन्मुक्ति दिलाईका थिए । उक्त काण्डमा ठूलै सेटिङ भएको थियो । खातामा करोडौं रुपैंया देखिए पनि पैसाको छानबिन नगरपछि ठूलै सेटिङ भएको पुष्टि भएको हो ।
पक्राउ परेका तिवारीलाई काठमाडौं प्रहरीले एक साता मै दुई सय रुपैयाँमा छुट्ने गरी मिशिल खडा गरेको थियो । तिवारीलाई संगठित अपराध, संस्थागत ठगी र सम्पत्ति सुद्दिकरणमा मुद्दा चल्ने भन्दै पोखरेलले मिडियासामु बताए पनि जुवा मुद्दा भन्दा अन्य कुनै मुद्दा लगाउन प्रहरीले सकेन । अहिले यहि गिरोहले आईपीएलमा सट्टेबाजीको धन्दा चलाईरहेको छ ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको पैसा मिटरव्याजमा चलाउने तिवारीलाई पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पनि संरक्षण रहेको स्रोत बताउँछ ।
शिल्पा पुलिस अफिसर
काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल प्रहरी अफिसर बनेकी छन् । फिल्म ‘विरंगना’ मा यी अभिनेत्री शसस्त्र प्रहरीको अफिसरका…
यस्ता छन् विहान एक पोटी लसुन र एक गिलास पानी खानुका फाइदा, जस्ले मुट र यौन दुर्वलता हटाउछ ?
लसुन प्राय: हामीले तरकारी पकाउँदा प्रयोग गर्ने गर्छौ तर यसका स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै गुणबाट हामीमध्ये सायद थोरै मात्रै जानकार छौँ।
एजेन्सी । बलिउडमा चलचित्र र विवादको सम्बन्ध पुरानो नै हो । सञ्जय लीला भन्सालीको चलचित्र पद्मावतले चलचित्र क्षेत्रमा तहल्का…
जनप्रतिनिधि योजना माग्दै घरदैलोमा
काठमाडौँ । नेताहरु चुनावको बेलामात्र घरदैलो गर्छन् भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्न काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ९ का जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका…
मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका विषयमा कुरा उठेपछि प्रधामन्त्रीद्धारा हस्तक्षेप 56 views